Mpandrindra milina - Wikipedia
Ny mpandrindra milina azo afohezina ho SE na OS (amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny anglisy) na koa rafitra fikirakirana dia karazana rindrankajy iray mandrindra ny solosaina ary ahafahan'ny rindrankajy madinika handeha. Izy io dia karazana tetezana ahafahan'ny rindrankajy (software) mampiasa ny fitaovana (hardware).
Mpandrindra milina ary rindrankajy miasa aminy
Ny mpandrindra milina, ankoatra ny izy tetezana anelanelan'ny rindrankajy sy ny fitaovana, dia manamora ny fampiasana ny fitaovana ary manao ny tao rehetra mba hanakely ny zava-diso mety hisy (fanasarahana ny zava-diso, fahatantesana ny fahasimbana) ary ny antoka informatika.
Ny mpandrindra milina dia mety handrindra ny fampiasana ny prosesaoro (processeur), manome ny anjaram-potoan'ny processus, anjaran-tahiriny ao amin'ny tahiry (memoire) sy/na ao amin'ny kapila fitehirizana sns. ; ny processus dia voalahatra ao amin'ny kapila fitehirizana amin'ny alàlan'ny famoronana rakitra (fichier) mitondra tovan-drakitra mahasamihafa azy amin'ny karazan-drakitra hafa. Ny rakitra moa dia mety lahatsoratra nampidirina tamin'ny alàlan'ny klavie, sary nampidirina avy amin'ny skanera, na natao tamin'ny voalavo (souris).
Ny mpandrindra milina koa dia mety milaza ny zavatra tokony aseho eo amin'ny efa-joro (écran) amin'ny alàlan'ny baikony ao amin'ny olik'aratra voarafitra ho an'ny fanehoana sary azo lazaina koa hoe carte graphique amin'ny teny frantsay.
Ny mpandrindra milina dia matetika varotana miaraka amin'ny fitaovana informatika. Rindrankajy maro samihafa no varotana miaraka amin'ny mpandrindra milina . Ahafahan'ny mpampiasa mandahatra ny paramtatra fandaharana (paramètres de configuration) an'ny mpandrindra milina ny rindrankazy, na manao tao tsotra toy ny manova rakitra.
Ny mpandridra milina voalohany dia noforonina tamin'ny 1960. Tamin'ny 2010, ny mpandrindra milina malaza indrindra dia Unix (ao koa Mac OS sy Linux) ary Windows, ny Windows dia ao amin'ny ankabeazan'ny solosaina ; 90%n'ny solosaina personaly misy eto an-tany ankehitriny dia manana mpandrindra milina Windows, kanefa 50%n'ny lohamilina misy eto an-tany no manana ny mpandrindra milina Unix.
1 Karazana mpandrindra milina
1.1 Mahatanteraka asa tokana ary mahatanteraka asa maro
1.2 Iasam-pampiasa iray na iasam-pampiasa maro
1.3 Mpandrindra milina maro
3 Karazana mpandrindra milina
5 Mpandrindra milina amin'ny fotoana katroka
6 Fanoratana mpandrindra milina ho fialam-boly
7 Fahasamihafan'ny mpandrindra milina ary fahafaha-mampiasa amin'ny milina maro
9 Vangio koa
Karazana mpandrindra milinaHanova
Mahatanteraka asa tokana ary mahatanteraka asa maroHanova
Iasam-pampiasa iray na iasam-pampiasa maroHanova
Mpandrindra milina maroHanova
Mpandrindra milina amin'ny fotoana katrokaHanova
Fanoratana mpandrindra milina ho fialam-bolyHanova
Fahasamihafan'ny mpandrindra milina ary fahafaha-mampiasa amin'ny milina maroHanova
Fizaran'ny rafitra fikirakirana ambony milina novarotana tamin'ny 2013
↑ Lance Whitney (7 January 2014). Android device shipments to top 1 billion this year -- Gartner.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Mpandrindra_milina&oldid=770017"
Dernière modification le 5 Aogositra 2015, à 13:29
Voaova farany tamin'ny 5 Aogositra 2015 amin'ny 13:29 ity pejy ity.